पर्यटन उद्योग केबल आर्थिक समृद्धिको विषय मात्रै होइन, यो सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिसँग पनि जोडिएको विषय हो । भौतिक र प्राकृतिक सम्पदाको विकास पनि पर्यटनसँग अन्तरसम्बद्ध विषय हुन् । यस्तै रोजगारी, सुरक्षा र नयाँ सम्भावनाहरू पनि यससँग जोडिएका छन् । पर्यटन उद्योगको विकासद्वारा हामी ठूलो समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौं । त्यो समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? यस विषयमा सोच्न आवश्यक छ ।
हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट नै शुरू हुन्छ । हरेक यात्रा शून्य किलोमीटरबाट शुरू हुने भएकाले सम्भावनाको यात्रा पनि शून्य किलोमीटरबाट थालनी गर्नुपर्छ । पर्यटन उद्योग स्थापनाका लागि त्यो यात्रा शुरू गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
हामी अझै पनि गरीबीसँग जुझिरहेका छौं । पर्यटन उद्योगको विकास किन गर्नेभन्दा यो गरीबीलाई निवारण गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने सबैभन्दा राम्रो अवसर हो । नेपाल लगायत लाओस, कम्बोडिया जस्ता देशको मुख्य समस्या गरीबी हो । मुलुकभित्रको गरीबी हटाउनु अहिलेको पहिलो चुनौती हो । रोजगारी सृजना हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रको विकासद्वारा गरीबी हटाउन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो बनाई मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढ्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकको प्रमुख समस्या कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने हो ।
लाओस, भुटान जस्ता अन्य भूपरिवेष्टित राष्ट्रको चुनौती पनि यही हो । बजारमा भएको स्रोतको समुचित प्रयोग गरी सम्भावनाको सृजना गरेर रोजगारी बढाउन सकिन्छ । एउटै क्षेत्रमा मात्र निर्भर नभई बजारमा भएका अन्य सम्भावनाको क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको विकासद्वारा मुलुकको गरीबीलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा कृषिभन्दा बाहिर रोजगारीका लागि प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो ।
निर्माण क्षेत्रबाट पनि हामी बेरोजगारी निर्मूल पार्न त सक्छौं, तर सबै शिक्षित युवा निर्माण क्षेत्रमै मात्र संलग्न हुन चाहँदैनन् । यो उचित पनि हुँदैन । उनीहरू नयाँ केही गर्न चाहन्छन् । यसका लागि पनि पर्यटन उद्योग कृषिमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने उचित क्षेत्र हो । कृषिबाहेक सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्न सकिने सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन हो । किनभने सबै वर्ग र थुप्रै क्षेत्र पर्यटन उद्योगसँग जोडिन सक्छन् । पर्यटन उद्योगमा सामान्य श्रमिक, वेटर, ट्याक्सी ड्राइभर, होटल सञ्चालक लगायत सबै वर्ग सहभागी हुनसक्छन् । यति मात्र नभएर कृषि गरिरहेका व्यवसायीले पनि पर्यटनसँग जोडिएर लाभ लिन सक्छन् । साहसिक पर्यटनमार्फत ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक पनि पर्यटन उद्योगमा जोडिन पाउँछन् । पर्यटनको विकाससँग उत्पादन, हस्तकला, खेलकुद, यातायात, आधुनिक कृषि, सामाजिक विकास लगायत अन्य थु्रपै क्षेत्र पर्यटनसँग जोडिन जाने हुँदा अन्य थुप्रै क्षेत्रले यसबाट फाइदा लिन सक्छन् । यसकारण ठूलो होटल व्यवसायीदेखि आर्थिक स्थिति कमजोर भएको वर्गले पनि यसबाट सजिलै फाइदा लिन सक्छन् । यो क्षेत्र प्रत्यक्ष आम्दानीसँग जोडिने भएकाले यसबाट पर्याप्त रोजगारी सृजना गरी समाजमा रहेको वर्गीय असमानता हटाउन सकिन्छ । पर्यटक कुनै ठाउँमा उनीहरूले गर्ने खर्चको एउटा महत्त्वपूूर्ण अंश त्यसक्षेत्रमा बसोवास गर्ने स्थानीयहरूले पाउँछन् । त्यसकारण, पर्यटन सम्पत्ति वितरणका लागि एक प्रभावकारी उपाय पनि हो । देशको ठूलो आर्थिक सञ्जालालाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ ।
पर्यटनमा गरिएको लगानीले अन्य थुप्रै आर्थिक क्षेत्रसहित सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्छ । हाम्रो संस्कृति र पर्यावरणलाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ । हामी नयाँ ज्ञान बटुल्न सक्छौं । यसले अन्य देशसँग सम्बन्ध जोड्न र द्विदेशीय मित्रता बढाउन सकिन्छ । अन्य सम्प्रदायको संस्कृति, सभ्यता, विश्वप्रणालीको अध्ययनमा पनि पर्यटनले सहयोग पुर्‍याउँछ । यसकारण पर्यटन उद्योग मुलुक विकासको कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।
नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधतायुक्त देश हो । यसकारण पर्यटनको क्षेत्रमा अथाह सम्भावना भएकाले समृद्धिका लागि दिगो पर्यटन आवश्यक छ । तर, दिगो पर्यटनका लागि प्राकृतिक सौन्दर्यलाई जोगाइराख्न पनि आवश्यक छ । हामीले हाम्रो प्रकृति र संस्कृति अर्को पुस्तालाई हस्तान्तण गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको विनाश नगरीकन पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ । हामीले सधैं हामीसँग भएको स्रोतसाधनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गरी पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ । स्रोतको विनाशविना पर्यटनको विकास गरी देशलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विकासको बाटोमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।
(अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले न्यू बिजनेश प्रालिले आयोजना गरेको न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अर्वार्डस् कार्यक्रमको उद्घाटनमा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण[२०७७ कार्तिक, ४]
नेपालको संगठनात्मक व्यवहार कठिन मोडमा[२०७७ कार्तिक, ४]
विवाद निराकरणमा मेलमिलाप[२०७७ कार्तिक, ३]